सरकारले रुचाएको छैन भन्ने विश्लेषणमा म पुगिसकेको छैन, बीमा समितिका अध्यक्षको अन्तर्वार्ता :: BIZMANDU
सरकारले रुचाएको छैन भन्ने विश्लेषणमा म पुगिसकेको छैन, बीमा समितिका अध्यक्षको अन्तर्वार्ता
प्रकाशित मिति: Dec 30, 2018 9:44 AM
नेपाल राष्ट्र बैंकका क्याडर चिरञ्जिबी चापागाइँ बीमा समितिको अध्यक्ष भएपछि १२ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सुरुमा उच्च गतिमा काम गरेका उनले नियुक्तिको दुई बर्षमा कहिले मुद्दामामला कहिले पदै जाने ऐनको मस्यौदाका कारण काममा सुस्त पनि देखिए। अध्यक्ष चापागाईँलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र अरुण सापकोटाले सोधे- बीमा समितिमा दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐन (बाफिया) मन्त्रालयबाट केहि बिग्रिएर आएको हामीले देखेकै थियौं। बीमा ऐन पनि बाफियाको जस्तै गरि नआओस भनेर पुनः मस्यौदा गर्यौं। मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा पेस गर्दा केहि कुरा बिग्रिएर गयो। जसले गर्दा यो पोष्ट (बीमा समितिको अध्यक्ष) मा उतारचढाव आयो। त्यसले गर्दा कहिले काम गरौ काम गरौ जस्तो हुन्छ, कहिले चाँही काम गरे पनि यस्तै त रैछ नि भन्ने नैराश्यता आउँदो रैछ।
आफ्नो पदकै संशयका कारण तपाईले पछिल्लो समय काम गर्न छाड्नु भएको भन्ने पनि बुझाइ छ नि?
नयाँ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी आइसकेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना भयो। ७० वर्षको अवधिमा जति प्रगति हुनु पर्ने थियो भएकै थिएन। तर यो उपलब्धि एक वर्षकै अवधिमा भयो। चौथोमा जीवन बीमा कम्पनी गाँउगाउँसम्म गए। जनचेतना फैलाए। अर्को हामी बीमा समिति आफैले करिव करिव १५/२० वटा महानगर, नगरपालिकामा गएर अन्तर्क्रिया गर्यौ। यसले पनि केहि काम गर्यो। म आफु राष्ट्र बैंकमा बस्दा बीमा क्षेत्रको यति धेरै प्रचार भएको थाहा छैन।
हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। जस्तो तपार्इले मस्यौदा बनाएर पठाउनु भयो मन्त्रिपरिषदबाट अर्कै भएर आयो। भनेपछि त यो सरकारले तपाईलाई रुचाएको छैन?
सुरुमा तपाईले जुन आक्रमणको कुरा गर्नु भयो, त्यस हिसावले त हो कि जस्तो लाग्यो नि?
दुई वर्षको अवधिमा कहिले स्पिड कहिले स्लो हुनु भयो। यस अवधिमा के उपलब्धि हासिल गर्नु भयो?
स्लो भनेको सायद दुई/तीन महिना होला। त्यसबाहेक म स्पिडअपमै छु। यो दुई वर्षको अवधिमा देखिने गरी धेरै उपलब्धि प्राप्त भएको छ। जस्तो ७० बर्षको इतिहासमा बीमाको दायरा ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै पुगेको थियो। बाँकी दुई बर्षको अवधिमा हामीले ७ लाई १४ प्रतिशत बनाउन सफल भयौ। ०७५ असार मसान्तसम्म सबै जीबन बीमा कम्पनीमार्फत ४३ लाख ४३ हजार ५३५ वटा बीमालेखहरु जारी भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा के हुन्छ भने केहि मान्छेहरुले डवल ट्रिपल पनि बीमा गरेका हुन्छन्। त्यसमा ५ प्रतिशत दोहोरिएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्दै घटाउँदा पनि हाम्रो बीमाको पहुँच १४ प्रतिशत भएको छ। यो असारको तथ्याङ्क हो। त्यसपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले धेरै वटा बीमालेख जारी गरिसकेका छन्। त्यसैले यो प्रतिशत अझै बढ्छ। अब आउने चौमासिक प्रगति विवरणमा यो तथ्याङ्क धेरै बढ्नेछ। जीवन बीमाको क्षेत्रमा यो महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। गत असारको वित्तीय विवरण अनुसार जीवन बीमाको वृद्धिदर ३१/३२ प्रतिशत छ भने निर्जीवनको १८/१९ प्रतिशत छ।
दुई वर्षमा यो कसरी सम्भव भयो?
निर्जीवन बीमा कम्पनीको वृद्धिदर अघिल्लो बर्षमा पनि १८/२० प्रतिशत थियो। निर्जीवनमा जुन गति थियो, त्यहि गतिमा अहिले पनि छ। जीवन बीमाको वृद्धिदर ३१/३२ प्रतिशत हुनुको मुख्य कारण, म नियुक्त हुनुभन्दा पहिले अभिकर्ताको आन्दोलन थियो। पहिलो नम्बरमा म आएको एक महिनाभित्रै यसलाई साम्य पारे। यसले सहज वातावरण बन्यो। दोस्रो लाइसेन्सिङ पनि गरेकै हो। नयाँ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी आइसकेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भयो। ७० वर्षको अवधिमा जति प्रगति हुनु पर्ने थियो भएकै थिएन। तर यो उपलब्धि एक वर्षकै अवधिमा भयो। चौथोमा जीवन बीमा कम्पनी गाँउगाउँसम्म गए। जनचेतना फैलाए। अर्को हामी बीमा समिति आफैले करिव करिव १५/२० वटा महानगर, नगरपालिकामा गएर अन्तर्क्रिया गर्यौ। यसले पनि केहि काम गर्यो। म आफु राष्ट्र बैंकमा बस्दा बीमा क्षेत्रको यति धेरै प्रचार भएको थाहा छैन।
जसरी तपाई आउने वित्तीकै १० वर्षदेखि दिन नसकेको लाइसेन्स खुलाउनु भयो। एकै चोटि १२ वटा कम्पनीलाई दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेर आउनु भएको मान्छे यता आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गल्ती गरेको थियो, बीमा समितिमा आएर एकै पटक लाइसेन्स दिएर त्यहि गल्ती गर्नु भयो भन्ने बिश्लेषण हुन्छ?
जीवन बीमालाई मैले लाइसेन्स दिने पनि होइन। मैले त फाइल फर्वार्ड गर्ने हो। अर्थमन्त्रालयमा हाम्रो निर्देशिका अनुसार फाइल आयो है भन्दै पठायौं। तत्कालिन अवस्थामा सरकारले ५ वटालाई मात्रै दिएको भए हुन्थ्यो। कि मैले त्यहाँ ५ वटालाई प्राथमिकतामा राखेको पो थिए कि? तर अर्थमन्त्रालयबाटै टिप्पणी उठाएर स्वीकृति भएको हो। एकातिर प्रकृयाको हिसावले गलत थिएन। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जस्तै धेरै लाइसेन्सिङ भएको पनि होइन। बीमा कम्पनीहरुमा जीवनले जीवन मात्रै र निर्जीवनले निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्न पाउँछन्। २९ वटा बीमा कम्पनी भए पनि कामका आधारमा फरक फरक छ। नेपालको बजारले २० वटा जीवन बीमा कम्पनी धान्छ जस्तो लाग्छ।
नयाँ कम्पनी आएसँगै कम्पनीबीचमा बिजनेस खोसाखोसको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु व्याजले गर्दा टिकिरहेका छन्। कम्पनीहरुले वास्तविक व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन्। संख्या बढ्यो जसका कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो होइन र?
फेक पोलिसी जारिभइरहेका छन्। नियन्त्रण कसरी हुन्छ?
केहि दिन अगाडि ल्याउनु भएको एकिकृत सम्पत्ति बीमा कस्तो किसिमको बीमा लेख हो?
यसमा पनि व्यापार व्यावसाय गर्नेहरुको लागि व्यवसायिक सम्पत्ती बीमा र गार्हस्थ भनेर छुट्टाएका छौ। जसले विजनेस व्यापार गर्छन् उनीरुको लागि प्रति हजार एक रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौ। जसको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मात्र गर्छ उसलाई प्रति हजार एक रुपैयाँ तिर्दा महँगो हुन्छ। एक करोड रुपैयाँको बीमा गर्दा १४/१५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। बीमाको दर जति धेरै हुन्छ यसको दायरा बढ्न सक्दैन। त्यस्ता मानिसहरुलाई नयाँ पोलिसी भित्र ल्याउनको लागि र दायरा बढाउनको लागि प्रति हजार ४० पैसा सम्ममा बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौ। यसमा सम्पूर्ण जोखिम कभरेज हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरुले सस्तोमा जोखिम बहन गर्ने परिपाटिले पुनर्बीमा गर्न गाह्रो परेको भनिरहेका छन्। यसले गर्दा राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन नि?
राज्यले अनुदान दिएको कृषि बीमामा कस्तो प्रगति देखिएको छ?
नेपालमा कृषि बीमा उत्साहवर्द्धक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा २०७४/७५ मा कृषि बीमा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ५२ करोड रुपैयाँको प्रिमियम संकलन भएको छ। साथै १२ अर्ब रुपैयाँको बीमा भएको छ। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा उत्साह दखिएको छ। स्थानीय निकाय आइसकेको अवस्थामा उहाँहरुले कृषि बीमालाई महत्व दिनु भएको छ। राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदान पनि दिइरहेको छ। यसले गर्दा उल्लेख्य हिसावले अगाडि बढिरहेको छ। बीमा कम्पनीहरुलाई भाग लगाएर सबै जिल्लामा पुग्ने वातावारण बनाएका छौ।
सरकारले रुचाएको छैन भन्ने विश्लेषणमा म पुगिसकेको छैन, बीमा समितिका अध्यक्षको अन्तर्वार्ता को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।